Home News MW Axmad Madoobe: “ cid gooni ah go’aan kama gaari karto qaabka...
MW Axmad Madoobe: “ cid gooni ah go’aan kama gaari karto qaabka doorasho dalka uga dhaceyso, horay uma dhici, mana dhici doonto , taladda dalka…..”
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa maanta khudbad qiiro leh ka jeediyay furitaanka shirka Dowlad Goboleedka ee ka furmay magaalada Gawowe. MW Axmed ayaa sheegay in dalkii faraha ka sii baxayo keeni doontana in bur-bur hor leh dalka ka dhaco. Madaxweynaha ayaa ku nuux nuuxsday sida loogu tagri falay dhaqaalihii dalka loogu yaboohay iyo go’aano aan mas’uuliyad ku dhisneynin oo koox albaabada soo xiratay gaareyso.
Mar uu ka hadlayay arimaha doorashada 2020 ayuu yiri “ cid gooni ah go’aan kama gaari karto qaabka doorasho dalka uga dhaceyso, horayna uma dhici, mana dhici doonto , taladda dalka waa ay naga wada dhaxeeysaa”.
MW Axmad Madoobe aya sidoo kale ka hadlay in dowlada dhexe wado dacaayad dhaheysa dowlad Goboleedyadda waa ay ku darsanayaa oo ma doonayaa in doorasho dhacdo. Waxa uu sheegay in arintaas tahay dacaayad raqiis ah oo been abuur ah. Waxaa uu yiri “Doorashooyinka dowlad Goboleedyadda waa ay dhacayaan waqtigooda ayaa dhacayaan, cidii wax isku hayso oo rabta in ay ka qeyb gashana tartanka ha isku diyaariso” .
MW Axmed ayaa sidoo kale sheegay in dalku u baahan yahay shir ama wadatashi heer qaran ah oo Soomaali la isugu soo dhaweynayo si dalka loo badbaadiyo.
Previous articleShirkii Dowlad Goboleedyadda oo maanta ka furmay magaalada Garowe
Next articleDad Laga Soo Celiyay Dalka Eritrea Oo Maanta Laga Soo Dajiyay Muqdisho
R/wasaare Abiy Axmed Oo Ka Sheegay Hadalka Ka Farxiyay Shacabka Kililka...
Xiisad Dagaal oo u dhaxeeysa Al-shabaab iyo Daacish oo ka taagan...